टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट माग्नेहरू 'भिखारी' नै हुन् त? :: हेम गिरी :: Setopati
पछिल्लो समय टिकटक प्रायः धेरैको लागि मनोरञ्जन, सूचना अनि जानकारी प्राप्त गर्ने धेरै राम्रो माध्यम बनेको छ।
कला, गला, क्षमता, सीप अनि अन्य प्रतिभा भएकाहरूको लागि टिकटक एउटा यस्तो अवसर प्रदान गर्ने थलो बनेको छ भनेर भनि साध्य छैन।
यदि तपाईं नाच्न मात्र जान्नु हुन्छ भने टिकटकमा केही भिडिओहरू पोस्ट गर्नु मात्र होस्, तपाईंहरूलाई म्युजिक भिडिओको अवसर पक्कै आउँछ नै।
गीत गाउने कला छ भने गीतको गाउने प्रस्ताव कसो नआउला र ?
म्युजिक भिडिओ त भयो भयो अब अहिले नेपाली चलचित्रको लागि टिकटकमा आएका नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गर्ने भनेर निर्देशक अनि निर्माताहरूले भन्न थालिसकेका छन्।
टिकटकबाट आएका हुन् भनेर ट्याग भिरिरहेका केही कलाकारूरु अहिले निकै चर्चित छन्।
यो सबै टिकटकले सिर्जना गरिदिएको अवसरको कारण हो।
हरेक कुराको राम्रो अनि नराम्रो पाटो हुन्छ नै। टिकटकको पनि केही न केही पक्कै नराम्रो पाटो होला, तर त्यसरी हेर्नुभन्दा, टिकटकले तपाईंलाई नै केही नगरे पनि तपाईंको आसपास अनि अन्य व्यक्तिहरूमा पारेको सकारात्मक प्रभाव पनि हेर्नुहोस्।
आफ्नो हेरक गतिविधिको प्रचारप्रसार गर्ने, यो धेरै कलाकारहरूले गर्छन्।
आफ्नो नयाँ गीत या म्युजिक भिडिओ युट्युबमा आउन साथ टिकटकमा गीतको सर्ट भिडिओ बनाउन सुरू हुन्छ।
अनि आफूसँग भएको प्रतिभा देखाउने अनि पैसा कमाउनको लागि तपाईं कतै नगई घरमै टिकटक चलाएर यो सब काम गर्न सक्नु हुन्छ।
यति मात्र होइन टिकटकमा तपाईं हामीले टिप्सहरू पनि धेरै प्राप्त गर्ने गरेको छौं।
डाक्टरहरू टिकटकमा आएर स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी गराउँछन्। यो महामारीको बेला कसरी धेरै सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा थप जानकारी मिल्छ। अधिवक्ताहरू कानुनको ठेली सुनाउँछन् टिकटकमै आएर। केही कानुनी समस्या भए, तिनै अधिवक्ताहरूको टिकटक भिडिओ हेरेमात्र पनि धेरै जानकारी मिल्छ।
विदेशमा बसेका नेपालीहरूको विदेशी जीवन टिकटकमै देखिन्छ।
गाउँ घरमा बसेकाहरू घाँस दाउरा गर्दै टिकटकमै आउँछन्। ठूला ठूला व्यापारी शेयर बजारको कुरा टिकटकमै आएर गर्छन्।
केही नेताहरूले टिकटकमै आफ्नो भाषणहरू राख्न थालेका छन्। ज्योतिषहरू टिकटकमै चिना हेर्न आउँछन्। टिकटकमै भेटेर विवाह समेत गरेर परिवार चलाउनेहरू छन्।
यो सब टिकटकको चमत्कारी पाटो हो। टिकटकमा यो छँदैछ तर यो भन्दा धेरै चमत्कारी पाटो चाहिँ टिकटकले धेरै नै चम्काइ दिएकाहरूको जीवन हो।
मैले यहाँ कसैको नाम लेखेर यसलाई या उसलाई टिकटकले चम्काइदिएको हो भनेर भनिरहनु पर्दैन किनकि तपाईंहरू सबैलाई ती नामहरू थाहा छन्।
हुन त टिकटकबाट चम्केकाहरू अहिले, हामी हाम्रै मेहनत अनि पसिनाले चम्केका हौ भन्छन् तर यदि यो संसारमा टिकटक नभइदिएको भए, टिकटकबाट आएकाहरू यो संसारमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सायद हामीलाई थाहा हुन्न थियो होला अपवादबाहेक।
सामाजिक सञ्जालहरूको शक्ति तपाईं हामीले सोचेभन्दा अत्यधिक हुन्छ।
टिकटकबाट चम्केकाहरूलाई टिकटक सेलिब्रिटी भनेर भन्दा पनि कुनै समस्या नहोला। अरूको प्रगतिमा आँखा लगाउने बानी छँदै छैन। आँखा लगाएर यो लेख लेखेको पनि होइन। यति चाहिँ भन्छु, टिकटकबाट चम्केका सबै टिकटक सेलिब्रिटीहरूलाई शुभकामना।
अब कुरा गरौं टिकटकमा लाइभ बसेर आफ्नो शुभचिन्तक, साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेकी अनि आफ्नो फ्यान फ्लोअरहरूलाई उपहार (गिफ्ट्) माग्नेहरूको विषयमा।
अस्ति एउटा टेलिभिजन प्रस्तोताले टिकटकमा त्यसरी लाइभ बसेर गिफ्ट माग्ने कलाकारहरूलाई 'भिखारी'सम्म भने।
टिकटकमा गिफ्ट कलाकारहरूले मात्र मागेको देखिन्न। नेता भन्ठान्ने पुण्य गौतमदेखि सुदूरपश्चिमका अंशुवर्माहरूले टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट माग्छन्। भिखारीको अर्थ के हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ। जसलाई पायो उसैलाई भिखारी भनेर, भिखारीको सही अर्थलाई गलत प्रयोग नगरौं।
टिकटकबाट कसैले गिफ्ट मागेर अरू कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्छ भने अब उसलाई भिखारी भनिरहने हो त ? टिकटकमा प्राप्त भएको गिफ्टमार्फत् आएको रकम केही आफूसँग राखेर अरू रकमले सामाजिक काममा कुनै टिकटक सेलिब्रेटीले प्रयोग गर्छन् भन्ने के हामी पुनः भिख मागेर सेवा गर्यो यो 'भिखारी' हो भनिरहने हो त ?
कसैको सेवा गर्नु गलत होइन। सहयोग अनि सेवा गर्न कुनै कारणहरू हुनु पर्दैन। कुनै टिकटक सेलिब्रेटीले लाइभ बसेर पाएको गिफ्टले कुनै परिवारलाई केही साताको लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराएको खबर सुन्नु भएको छ कि छैन ? सुन्नु भएको छैन भने, ल सुन्नुहोस्, टिकटकमा पैसा बाँड्दै हिँड्नेहरूले आफ्नो पकेटको पैसा बाँडिरहेको हुन्छन् र ? के पुण्य गौतमले कुनै बिरामीलाई आफैंले पकेटबाट ५०-५० हजार सहयोग गरिरहेको छन् त ? या अरू कसै टिकटक सेलिब्रेटीहरूले कुनै आश्रमहरूतिर आफ्नो पाकेटबाट सहयोग गरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ ?
यो सबै टिकटकबाट प्राप्त भएको उपहार (गिफ्ट मनि) को कमाल हो। कसैले सेवा गरेर टिकटक बनाए पनि भयो या फोटो खिचून्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएन। महत्वपूर्ण कुरा त त्यो भयो, बिहान के खाऊँ बेलुका के खाऊँ भनेर बसिरहेकाहरूले केही साताको लागि भए पनि खाना त पाउने भए। या बिरामीहरूले आफ्नो उपचारको लागि केही न केही आर्थिक सहयोग त प्राप्त गरे।
कसैको मुहारमा खुसी ल्याइदिनेहरूलाई किन भिखारी भन्नु ? फेरि मैले यसो भनेर सबै टिकटकमा गिफ्ट माग्नेहरूले सेवा गर्छन् भनेर भनिरहेको होइन।
आफ्नो लागि कसैसँग केही माग्नु र कसैलाई केही मागेर अरूको सेवामा प्रयोग गर्नु दुई फरक कुराहरू हुन्।
हामी टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट माग्नेहरूलाई भिखारी नबनौं, उनीहरूले डोनेसन कलेक्सन गरेको हुन् भनेर बुझुम्।
अब आफ्नै लागि मात्र मागेको हुन् भने फरक कुरा भयो।
त्यस्ताहरूलाई चाहिँ मगन्ते या भिखारी भन्दा खासै फरक नपार्ला। बाटोमा नबसेर, टिकटकमा बसेर केही मागे भन्ने अर्थ लाग्छ।
फेरि माग्ने बित्तिकै टिकटकमा उपहार दिनेहरू पनि कस्तो धेरै छन् भन्या। टिकटकमा उपहार माग्ने अनि दिनेहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा त्यति धेरै जानकारी त छैन तर यति भन्छु, गिफ्ट दिनेहरू पनि त्यति नै महान् छन् जति गिफ्ट मागेर अरूको सेवा गर्छन्।
यहाँ दिने अनि लिने दुबैको महत्व रहन्छ। महत्व नरहने भनेको, दश दुनियाँसँग गिफ्ट मागेर आफ्नै लागि मात्र प्रयोग गर्नेहरूको हो। सेवा अनि सहयोग गर्नेहरू कसैलाई पनि नराम्रो नबनौं। सम्मान गरौं।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८, ०७:२५:००